Didier Drogba ayaa qirtay inay jiraan cilado la xiriira caan - teles relay
Didier Drogba ayaa qirtay inay jiraan cilado la xiriira caan
Xiddig noqosho markasta ma sahlana! In kasta oo looga hinaasi karo sumcaddooda, lacagtooda iyo kumaankun mashruucooda, haddana caan noqoshada sidoo kale waxay leedahay dhowr cilladood. Didier Drogba ayaa ka hadlay.
Dareeno badan oo aan fiicnayn ayaa la socda nolosha xiddigaha. Tani waa waxa Drogba Didier u sheegay majaladda Berrito. Xiddiga ayaa rumeysan in lasiiyay fiiro gaar ah taasna waxaa ugu mahadcelinaya tayadiisa kubadeed.
Kabtankii hore ee maroodiyaasha, waa ku mahadsan tahay kubada cagta inuu yahay nin maanta la qabtay. Kubadda aniga ahaan waa xirfad, shaqo, xamaasad. Kubadda cagta ayaa ii oggolaatay inaan naftayda dhiso. Maxaa iga dhigay maanta nin dhammeystiran (…) Waxaan dhamaanteen ku riyooneynaa inaan noqono ciyaaryahanka ugu fiican adduunka, waxaan ku riyooneynaa inaan noqono shaqsiyad, waxaan dhamaanteen ku riyooneynaa inaan caan noqono sida Didier Drogba laakiin taas ma ogaanayno 'sumcad, sidoo kale waxay la timaadaa dhaleeceyn, xaasidnimo, xaasidnimo, is-weynaan iyo caan (…)
Haddii uu aad ugu qanacsan yahay guushiisa, laakiin gaar ahaan xirfaddiisa kubbadda cagta, ciyaaryahanka caalamiga ah ee reer Ivory Coast ayaa mararka qaar jeclaan lahaa inuu ka maqnaado isha. “Xirfadeyda kubada cagta waxaa hareeyay casharo nolosha ah. Ma jiro wax guul ah haddii aan warbaahinta la soo marin. Xitaa qofka ugu liita, xishoodka badan ayaa isha lagu hayaa. Ma sahlana haba yaraatee inaad noqoto qof caan ah, laakiin waxaa jira heerar nolosha qofka oo ay tahay inaad aqbasho inaad qaadato. Kuwani waa caqabadaha nolosha ee ay tahay inaad aqbasho taasina waa waxa kaa dhigi doona mid weyn ”, ayuu yiri.
Kadib markaad aqriso kalsoonidan Didier, wali miyaad dooneysaa inaad caan noqotid maalin uun? Hal shay waa hubaal, inaad maanta caan noqotid, waa inaad xoog yeelataa!
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.culturebene.com/64872-didier-drogba-avoue-quil-y-a-des-desagrements-lies-a-la-celebrite.html
TELES RELAY 36090 posts 1 comments
Ellen Degeneres: Kristen stewart, robert pattinson si loo siiyo xiriirkooda fursad labaad? - Video
Laga soo bilaabo atariishada ilaa haweeneyda ganacsiga, waa kuma Emmanuelle Keïta?